Ramarosaona Faraniaina: “Tsy tokony hisy tsimatimanota eto” | NewsMada
Ramarosaona Faraniaina: “Tsy tokony hisy tsimatimanota eto”
“Tokony hampiseho io Fitsarana avo (HCJ) io hoe tsy misy tsimatimanota eto.” Izay ny fanehoan-kevitry ny mpandrindra ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny hetsika Rohy, Ramarosaona Faraniaina, tamin’ny tatitry ny Birao mahaleo tena iadiana amin’ny kolikoly (Bianco), faritany Antananarivo, ny asa taona 2019 farany teo, momba ny asany Fitsarana avo (HCJ).
Misy mpitsara ao amin’ny HCJ, ary ny filoha voalohany amin’ny fitsarana tampony no mitondra ny fanadihadiana. “Fa mitodika any amin’ny solombambahoaka ny rehetra: hanao ve ianareo sa tsia an’izay antontan-taratasy 13 izay?” Mba hahafantarana hoe tsy misy tsy matimanota izany eto amin’ny firenena izay, na iza na iza.
Tsiahivina fa araka ny fanazavan’ny eo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), ny tonia voalohany mpampanoan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), Razafindrakoto Solofohery: miisa 13 ireo antontan-taratasy nalefan’ny Pac eny amin’ny Antenimierampirenena, izay mahakasika minisitra teo aloha avokoa ary saika momba ny fanodinkodinam-bolam-panjakana ny ankamaroany.
Mitovy avokoa ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna
Faharoa manaraka an’izay, araka ny fanazavan-dRamarosaona Faraniaina, miteny ny eo anivon’ny firaisamonina sivily hoe: na inona na inona firehana politika misy ny olona entina eo amin’ny Fitsarana avo, mitovy avokoa ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna. Mbola betsaka no tokony hoporofoin’ny Fitsarana avo amin’ny asany.
Raha jerena ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana, ambony be dia ambony be ny karaman’ireo mpikambana eo anivon’ny Fitsarana avo. Koa aiza no tambin’izay karama be izay? Mihoatra lavitra no ho an’ny Bianco sy ny Pac. “Aiza ho aiza izany? Mila ny fahafantarana an’izay izahay”, hoy izy. Mitodika any amin’ny mpikamban’ny Fitsarana avo ny rehetra: hanao tsimatimanota ve ianareo sa tsia?